Dr. Tint Swe's Writings: Hepatitis B အသည်းရောင် (ဘီ) ပိုး
ကျွန်တော့်အသက် ၂၅ နှစ်ပါ။ အပျော်အပါး တစ်ကြိမ်မှ မလိုက်စားဖူးပါဘူး။ ၂ဝ၁၄၊ မေလမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အဒေါ် စစ်ဆေးရုံမှာ သွေးလိုလို့ လှူပေးဖို့ပြောလို့ လိုက်သွားပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော့်သွေးက အိုသွေးပါ။ လှူမယ်ဆိုပြီး စစ်ဆေးမှုလုပ်တဲ့အခါ လှူလို့မရဘူး ပြောပါတယ်။ ဘီပိုး ရှိနေတယ်တဲ့ဆရာ။ ကျွန်တော် မကောင်းတာ ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ စုံစမ်းကြည့်တော့ ဘီပိုး ရှိသူဟာ တစ်သက်လုံး သွေးလှူလို့ မရတော့ဘူးတဲ့ဆရာ။ ဘီ ပိုးက မပျောက်ဖူးလဲပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သွေးလှူနေတဲ့သူတွေဟာ တစ်ချိန်က အသည်းရောင်အသားဝါ စီပိုး အထိ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတွေပါနေပါတယ်။ အပျော်အပါး၊ အရက်၊ ကွမ်း၊ ဆေးလိပ် စုံမက်သူတွေပါနေပါတယ်။ ကျွန်တော် အားလုံးကိုရှောင်ခဲ့သားနဲ့ ဘာတစ်ခုမှ မရှောင်သူတွေလောက်တောင် မသန့်သလိုပဲခံစားမိတယ်။ စီပိုးဆိုတာကကော ဘီပိုးပြီးမှ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဆရာ။ ဒါဆို သူတို့က ပျောက်သွားလို့ လှူလို့ရတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်ဆေးစစ်ချက်က မှားနေသလား။ ကျွန်တော် ဘယ်ကကူးနိုင်သလဲ။ သွေးလှူလို့ရတဲ့အဆင့်ထိ ရောက်နိုင်အောင် ကုသနိုင်ပါသလားဆရာ။ ဆေးကတော့ အခု ကျွန်တော့်ကောင်မလေးဝယ်ပေးတဲ့ Live Up ကိုသောက်ပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်လုံး သောက်ပါတယ်ဆရာ။ သူ့ကိုလည်း ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးထားပါတယ်။ ၃ ကြိမ်ထိုးရပါတယ်။
ဘီပိုးကနေ စီပိုးဖြစ်တာ မဟုတ်ပါ။ စီပိုးရှိသူလဲ သွေးမလှူရပါ။ မှားတာဖြစ်မယ်။ စီပိုးက သွေးကနေကူးလို့ ပိုဆိုးတယ်။
စီပိုး ပျောက်တယ်ဆိုတာ သွေးကိုသေချာစစ်ပြီးနောက် အသည်းအထူးကုဆရာဝန်ကသာ ပြောနိုင်တယ်။ အရပ်ပြောနဲ့ ပြောမရပါ။ Blood donation rules သွေးလှူခြင်းဥပဒေသများကိုပို့လိုက်ပါတယ်။
Hepatitis B virus (HBV) အသည်းရောင် ဘီပိုး ကူးစက်ခံနေရာသူပေါင်း သန်း ၃ဝဝ ရှိနိုင်တယ်။ အာရှ နဲ့ အာဖရိကမှာ ပိုများတယ်။ အဲဒီက တိုင်းပြည်တွေမှာ ပိုးရှိတဲ့ မိခင်ကနေ မွေးလာတဲ့ကလေးကို ကူးကြတာ ပိုများတယ်။ အသည်းကင်ဆာလဲ အဖြစ်များတဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်တယ်။ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဆေးထိုးအပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာကနေ ကူးကြတာ ပိုများတယ်။ လူငယ်ပိုင်းမှာဖြစ်တာ များတယ်။
ဘီပိုးက ကူးစရာလမ်းတခုခုကနေ သွေးထဲဝင်၊ နောက် အသည်းကို ရောက်တာနဲ့ Replication ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ပွါးများလာပြီး Surface material မျက်နှာပြင်-ပစ္စည်းတွေ ထုတ်တယ်။ သွေးထဲ ဝင်မယ်။ ပွါးများတာ များလာရင် သွေးထဲမှာ Load of virus (ဗိုင်းရပ်) အနည်း-အများ စစ်တော့ သိသိသာသာ တိုးနေတာ တွေ့လာမယ်။ ပွါးများတာ နည်းသေးရင် Virus core ဗိုင်းရပ်စ် အတွင်းသားကိုသာ အသည်းထဲမှာ စစ်လို့ရမယ်။ သွေးထဲမှာ မတွေ့ဘူး။
• HBsAg အပေါင်းဖြစ်နေရင် Virus ပိုးရှိနေတယ်။ Active viral replication ပွါးများတာ တက်တက်ကြွကြွ ဖြစ်နေတယ်။ အသည်းကိုလဲ ကူးနေတယ်။ သူများကိုလဲ ကူးစက်နိုင်တယ်။
• Anti-HBe ဆိုရင် Viral replication ပွါးများတာ နည်းသွားပြီ။ အသည်းရောဂါ မြုံနေတယ်။ သူများကို သိပ်မကူးစက်နိုင်ဘူး။
• HBV-DNA ဆိုရင် Active viral replication ပွါးများတာ ကောင်းကောင်း ရှိနေတယ်။ အသည်းမှာလဲ ရောဂါ ခံစားနေရတယ်။ သူများကိုလဲ ကူးစေမယ်။
• နာတာရှည် အသည်းရောင်နေတာကိုသိဘို့ HBsAg, (HBV) DNA နဲ့ တခါတလေ HBeAg တွေ စမ်းတယ်။
• နာတာရှည် အသည်းရောင် နေတာနဲ့ ဆေးကုနေတာကို စောင့်ကြည့်ဘို့ HBsAg, (HBeAg), (anti-HBs) IgG, (anti-HBe) IgG နဲ့ HBV DNA တွေ စမ်းတယ်။
• ဘီပိုး အသည်းရောင်ထားသူဟာ ခုခံအားစနစ် မကောင်းသူ ဖြစ်နေရင် (anti-HBc) total နဲ့ anti-HBs တွေ စမ်းတယ်။ စစ်နည်းတွေက ဘာလို့ အမျိုးမျိုးလုပ်ရသလဲ၊
1. Hepatitis B surface antigen (HBsAG) = ဗိုင်းရပ်စ် ရဲ့ မျက်နှာပြင် (ပရိုတင်း) ကို စမ်းတာ။ ရက်တိုရော နာတာရှည် ပိုးဝင်နေသူတွေမှာ တွေ့မယ်။ ပိုးဝင်တာကို အစောဆုံး သိတယ်။ လက္ခဏာတွေ မပေါ်ခင် ကတည်းက သိရတယ်။ နလံထချိန်မှာ သွေးထဲမယ် မတွေ့ရဘူး။ ဆေးကုသ ပေးနေသူမှာ မတော်တဆ ထိရှရင်၊ ကျား-ကျား လိင်တူဆက်ဆံသူ၊ ဝေဒနာသည် မဟုတ်ပေမဲ့ (ALT and AST) အသည်း-အင်ဇိုင်းတွေ များနေသူ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ HBV ပိုးရှိသူနဲ့ အတူနေရသူတွေကို စမ်းရတယ်။ ၆ လကနေ ၁ နှစ် တခါ စစ်ရတယ်။ သွေးလှူရှင်အားလုံးကို HBsAg စစ်ရတယ်။
3. Anti-hepatitis B core (anti-HBc), IgM = ခုခံတဲ့ (အင်တီဘော်ဒီ) ကို စမ်းတာ။ ပိုးဝင်ခံထားရတဲ့ အသည်း (ဆဲလ်) တွေမှာ တွေ့ရမယ်။ သွေးထဲမှာ မတွေ့နိုင်ဘူး။ ရက်တိုရော နာတာရှည်ပိုးဝင်တာကို စမ်းတယ်။ တခါရှိရင် တသက်တာ ရှိနေမယ်။
6. Hepatitis B DNA (HBV DNA) = Hepatitis B ရဲ့ Viral genetic material မျိုးဗီဇကိုစမ်းတာ။ လောလောဆယ် ပိုးရှိနေတာ၊ နာတာရှည်ဖြစ်လို့ ဆေးပေးနေသူတွေကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရာမှာ သုံးတယ်။ ဆေးက ထိရောက်ရင် ကျလာမယ်။ သွေးထဲမှာ (ဗိုင်းရပ်စ်) တွေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ အရေအတွက်ကို သိရတယ်။ များနေတယ်ဆိုတာ (ဗိုင်းရပ်စ်) က တက်တက်ကြွကြွ ပွါးများတာ လုပ်နေတယ်၊ အသည်းလဲ ထိခိုက်စရာ ရှိနေပြီ။ အရေအတွက် (100 IU/ml) ထက်နည်းရင် သူများကို မကူးနိုင်သေးဘူး။ ဆေးကုနေသူဆိုရင် ဆေးကုတာ ထိရောက်တယ်ဆိုတာ ပြနေတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ မပြပေမဲ့လဲ အသည်းကို ထိခိုက်လာနိုင်တယ်။ သူများကို ကူးစေနိုင်တယ်။
7. Hepatitis D (HDV) ဆိုတာ နောက် အသည်းကူးစက်ရောဂါတမျိုး ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Hepatits B ရှိနေသူကိုမှ ရစေတယ်။ ဒီ ၂ မျိုး ရနေတာ ရှိနိုင်တယ်။
• Acute infection, usually with symptoms; contagious ရက်တို အသည်းရောင်ရှိသူ၊ လက္ခဏာတွေ ရှိသူ၊ သူများကို ကူးစက်နိုင်သူ = (HBsAg) +ve, (Anti-HBs) –ve, (Anti-HBc IgM) –ve or +ve, (Anti-HBc IgG+IgM) -ve or +ve, (HBeAg) +ve, (Anti-HBe) –ve
• Late in the acute stage of infection (seroconversion) ရက်တို အသည်းရောင်ဖြစ်နေသူ နောက်ပိုင်း = (HBsAg) +ve, (Anti-HBs) –ve, (Anti-HBc IgM) +ve, (Anti-HBc IgG+IgM) +ve, (HBeAg) -ve, (Anti-HBe) +ve
• Acute infection is resolving (convalescent) ရက်တို အသည်းရောင် ပျောက်ကာစ = (HBsAg) -ve, (Anti-HBs) –ve, (Anti-HBc IgM) +ve, (Anti-HBc IgG+IgM) +ve, (HBeAg) -ve, (Anti-HBe) +ve
• Usually indicates an active chronic infection (liver damage likely) နာတာရှည်-အသည်းရောင်၊ အသည်းကို ထိခိုက်နေသူ = (HBsAg) +ve, (Anti-HBs) –ve, (Anti-HBc IgM) -ve, (Anti-HBc IgG+IgM) +ve, (HBeAg) +ve, (Anti-HBe) –ve
• Chronic infection but low risk of liver damage — carrier state နာတာရှည် အသည်းရောင်၊ ဒါပေမဲ့ အသည်းကို ထိခိုက်မှာ သိပ်မစိုးရိမ်ရသူ၊ သူများကို ကူးနိုင်သူ = (HBsAg) +ve, (Anti-HBs) –ve, (Anti-HBc IgM) -ve, (Anti-HBc IgG+IgM) +ve, (HBeAg) -ve, (Anti-HBe) +ve
• ၁% ထက်နဲသူတွေမှာ Fulminant hepatitis အသည်း လုံးဝမကောင်းဖြစ်လာပြီး သေဆုံးနိုင်တယ်။ Liver transplantation အရေးပေါ် အသည်းအစားထိုးရတယ်။
• Hepatitis B surface antigen (HBsAg) ရှိတယ်ဆိုတာ Virus infection ရှိနေပြီ၊ ဒါပေမဲ့ ကူးစက်နိုင်မယ်- မကူးနိုင်ဘူး မသေခြာသေး၊ အသည်း ပျက်စီးသလား-မပျက်ဘူးလား မသေခြာသေး။
• Hepatitis B "e" antigen (HBeAg) တွေ့တာက Core of the virus ကိုစစ်တာဖြစ်တယ်။ ပွါးများတာတွေ များများဖြစ်နေတယ်။ HBeAg မရှိတော့ဘဲ Antibody to HBeAg တွေ့လာတယ်ဆိုတာ ပွါးများတာတွေက နည်းလာတယ်။ အသည်းရောဂါလဲ သက်သာလာတယ်။ သူများကို ကူးဘို့လဲ နည်းလာတယ်။
• ရက်တို အသည်းရောင်ဖြစ်နေတုံးမယ် တချိန်မှာ HBeAg တွေ့မယ်။ နောက်ပိုင်းဆိုရင် ပွါးများတာတွေ နည်းလာ၊ အသည်းထိခိုက်တာ နည်းလာချိန်မှာ မတွေ့တော့ဘူး။
Chronic hepatitis B နာတာရှည် ဘီပိုးအသည်းရောင်ရောဂါ၊
• နာတာရှည် ဖြစ်သူတွေဟာ အမျိုးမျိုး ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ရေရှည်ပိုးသယ်ပေးသူဖြစ်နေမယ်။ အသည်းက ကောင်းနေမယ်။ ဖြစ်လဲနဲနဲသာ ဖြစ်မယ်။ Cirrhosis အသည်းခြောက်တာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
• နာတာရှည်အဆင့် အစပိုင်းမှာ Viral replication ပွါးများတာ ဖြစ်လာမယ်၊ Liver damage အသည်း ပျက်စီးလာမယ်။ HBeAg positivity ဖြစ်မယ်။ Elevated transaminases က အသည်းပျက်စီးတာကို ညွှန်ပြနေတယ်။ တချို့ အဲလိုမဖြစ်ဘူး။ တချို့မှာ နှစ်တွေကြာမှ ဖြစ်တယ်။
• HBeAg ပျောက်သွားရင် အသည်းကလဲ ငြိမ်နေမယ်။ ကူးစက်တာလဲ နည်းမယ်။ ဒီအဆင့်မှာ Virus DNA နဲ့ Liver cell DNA ပေါင်းစပ်နိုင်တယ်။ Hepatocellular carcinoma ဖြစ်လာရင် ပိုရှုတ်ထွေးလာမယ်။
• HBeAg ပျောက်၊ အသည်းကလဲ ငြိမ်၊ ကူးစက်တာလဲ နည်းတဲ့အဆင့်ကနေ Reactivated ပြန်တက်ကြွ လာနိုင်တယ်။ တခါမကလဲ အဲလိုဖြစ်နိုင်တယ်။ သူ့ဖါသူလဲ အဲလိုဖြစ်နိုင်သလို တခြားရောဂါကြောင့် Immunosuppressant therapy ဆေးမျိုးတွေ ပေးနေရလို့လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲလိုသာဆို အသည်း ပိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အသည်းမကောင်းသူတွေကို Immunosuppressant therapy ပေးရင် အထူးသတိထားရတယ်။
• ရောဂါရာဇဝင် မေးမယ်။ မိသားစု၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ဖို-မဆက်ဆံရေး၊ အသည်းရောဂါ လက္ခဏာတွေ မေးမယ်။
• စမ်းသပ်-စစ်ဆေးမယ်။ အသည်းကြီးနေသလား၊ အသားဝါနေသလား၊ ရေဖျင်းရှိနေသလား ကြည့်မယ်၊
• Bilirubin, Transaminases, Albumin, Prothrombin time အသည်းအလုပ် စစ်မယ်။ ၆ လ တခါစစ်မယ်။
• အသည်းမကောင်းတာ တွေ့သူကို Liver biopsy လုပ်မယ်။
• အသည်းမှာရောဂါရှိ၊ (HBeAg positivity) တွေ့လို့ Active viral replication ပွါးများတာလဲ ရှိသူကို ဆေးပေးမယ်။
• မိခင်က ပိုးရှိသူကမွေးတဲ့ကလေး ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်။ ဒါ့ပြင် Hepatitis B immune globulin (HBIG) ဆေးလဲ ပေးမယ်။
Conclusion အသည်းရောင် ဘီ ပိုးရောဂါ အချူပ်
Hepatitis B virus infection အသည်းရောင် ဘီ ပိုးရောဂါဆိုတာ အလွတ်ရှုတ်ထွေးပါတယ်။
2. Clinical acute hepatitis လတ်တလော အသည်းရောင်တာ နဲ့
3. Chronic hepatitis နာတာရှည်အသည်းရောင်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ငယ်ငယ်နဲ့ဖြစ်ရင် ဒါမျိုးပိုဖြစ်နိုင်တယ်။
a. သူကနေ အသည်း နဲနဲသာပျက်စီးတာ၊
b. Cirrhosis အသည်းခြောက်တာနဲ့
c. Hepatocellular carcinoma အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ကူးစက်နိုင်လောက်သူတွေကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ရနေပြီ။ နာတာရှည်ထဲက အသည်းလဲထိခိုက်၊ ပွါးများတာလဲ ဖြစ်နေသူတွေထဲက သင့်တော်သူ လူနာတွေကို Interferon ဆေးပေးနိုင်နေပြီ။ တခြား ဗိုင်းရပ်စ်ဆေး Lamivudine ကိုလဲ စမ်းသပ်နေတယ်။ အောင်မြင်မှုတွေ ရှိနေတယ်။
1. ၁ နှစ်တကြိမ် AST, ALT, Alkaline phosphatase နဲ့ Liver function (Bilirubin, Albumin, Prothrombin time) တွေ လုပ်မယ်။ Gastroenterologist/Hepatologist အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ မပြတ်ဆေးစစ်နေရမယ်။ အသည်း အခြေအနေကို စစ်မယ်။
3. ၆ လ တကြိမ် အသည်းကို Ultrasound လုပ်မယ်။ အသည်းကင်ဆာကို သေးသေးလေးကတည်းက သိရမယ်။
5. ၁ နှစ်တခါ HBeAg စစ်တာကို HBsAg positive ဖြစ်နေသူတွေကို လုပ်မယ်။ HBeAg positive (+) ဒါမှမဟုတ် AST>200 ရှိသူတွေ Liver biopsy (ဘိုင်အော့ပ်စီ) လုပ်မယ်။ Anti-viral treatment ဆေးကုမယ်။ အသည်းပိုပျက်စီးလာသူ၊ အသည်းကင်ဆာ သံသယရှိသူတွေလဲ ပါတယ်။
ဘီပိုးအကြောင်း ဆရာရေးထားတဲ့စာတွေ -
Hepatitis and Sweating အသည်းရောင် (ဘီ) ချွေးကနေ ကူးနိုင်သည်
Hepatitis B and breastfeeding အသည်းရောင် ဘီ ပိုးရှိသူ မိခင် နဲ့ ကလေးနို့တိုက်ခြင်း
Hepatitis B Antibody Level (ဘီ) ပိုး (အင်တီဘော်ဒီ) အနည်း-အများ
Hepatitis B Immune Globulin အသည်းရောင်-ဘီ (ဂလိုဗျူလင်) ထိုးဆေး
Hepatitis B medical treatment (ဘီ) ပိုးဆေးပေးခြင်း
Hepatitis B Prognosis (ဘီ) ပိုး အလားအလာ
Hepatitis B vaccine made from ဘယ်ကနေထုတ်သလဲ
Hepatitis B အသည်းရောင် ဘီ ပိုး
http://dts-medicaleducation.blogspot.in/ ထဲမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာလဲတင်ထားပါတယ်။